पाठेघरमा देखिने ‘सिस्ट’ के हो ? यो कति जोखिमपूर्ण हुन्छ ? (भिडियो) access_timeअसोज १०, २०७८
पाठेघरको ‘सिस्ट’ सामान्यतया महिलामा आम समस्याको रुपमा देखिएको छ । सामान्य ‘सिस्ट’लाई चिकित्सकहरुले समस्याको रुपमा नलिए पनि केही जोखिमयुक्त हुने हुँदा समयमै सचेत हुन जरुरी हुन्छ । समयमै उपचार गर्ने हो भने यो समस्या पूर्ण रुपमा निको हुने चिकि...
महामारीमा फस्टाएको रेमिट्यान्स सेवा, डिजिटल प्रविधिले शहरदेखि गाउँसम्म राहत access_timeसाउन २७, २०७८
नेपालको अर्थतन्त्रको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)ले धानिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रलाई थला पार्दासमेत रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा योगदान दिने थुप्रै संस्थामध्ये महामारीको मुखैबाट सञ्चाल...
प्रियंकाको ‘बेबी बम्प’ले चुलिएको सामाजिक बहस : हामी कहाँ छौं ? access_timeसाउन ९, २०७८
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा दुई किसिमका तस्बिरले चर्चा बटुलेको छ । एउटा ‘बेबी बम्प’ वाली आमा र अर्को बिरामी सन्तानको उपचारका लागि खर्च जुटाउन काखमा भाले र पिठ्यूँमा बिरामी सन्तान बोकेर हिँडेकी आमा । कलाकार प्रियंका कार्कीले आफ्नो गर्भावस्थालाई उत्सवका रुप...
युवाहरूलाई आम्दानीकै आधारमा ऋणमा पहुँच access_timeअसार २१, २०७८
विकसित देशमा थोरै आम्दानी गर्नेहरूको पनि क्रेडिटमा पहुँच हुन्छ । निश्चित उमेर पार गरेपछि आम्दानीअनुसार क्रेडिट सुविधा लिन सकिन्छ । तर नेपालमा थोरै कमाइ हुनेहरूलाई क्रेडिट सुविधा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तै छ । पछिल्लो समय फाइनान्सियल टेक्नोलोजीमा काम ...
ब्रान्डिङमा मेघेन्द्रको जादु access_timeअसार १५, २०७८
कुनै पनि कम्पनीको पहिचान भनेकै ‘ब्रान्ड’ हो । जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धन्दा, संघ संस्थालाई गति दिन होस् वा उत्पादनको पहिचान र बजार विस्तारका लागि ब्रान्डिङले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । ब्रान्डका लागि आजभोलि लाखौं–करोडौं खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ...
कोरोना महामारीले भन्दा पनि राजनीतिक महामारीले अत्यायो : सीईओ रत्नराज बज्राचार्य access_timeअसार २, २०७८
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्य कुशल व्यवस्थापकको रुपमा स्थापित छन् । उनी परिवारका सदस्यजसरी नै कर्मचारीप्रति चिन्ता जाहेर गर्छन् । त्यसैले कोरोना महामारीले मुलुकलाई आक्रान्त बनाइरहेको अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको स्वास्थ्यप्रति उनी निकै चन...
कोरोनाबीच बैङ्करमाथि आर्थिक वर्ष अन्त्यको चाप, कसरी हुँदैछ व्यवस्थापन ? access_timeजेठ २३, २०७८
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको महामारीबाट सिङ्गो मुलुक नै आक्रान्त भएको यो अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा पर्ने बैङ्किङ पनि अछुतो रहन सकेन । गत वर्षको कोरोना भाइरसको पहिलो लहरको महामारीबाट धेरै प्रभावित बने पनि दोस्रो लहरबाट भने कम प्रभावित भएको पाइएको छ । सरकारले अ...
आईसीयू नर्सको व्यथा : सबैको भगवान बन्न नसकिँदोरहेछ ! access_timeजेठ १५, २०७८
केही दिन अगाडि वीर अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत २७ वर्षीय युवकको अक्सिजन लेभल घट्दै गइरहेको थियो । आईसीयूमा खटिएका डाक्टर, नर्स उनको उपचारमा व्यस्त थिए । बिरामीकी श्रीमती १९ वर्षकी र छोरी ६ महिनाकी रहिछन् । यो सुन्दा आईसीयूमा कार्यरत नर्स मुना पोखरेलको मन विचलित भय...
कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा ‘प्लाज्मा थेरापी’ : के यसले काम नगरेकै हो ? access_timeजेठ ११, २०७८
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट सङ्क्रमित बिरामीका लागि कोन्भालासेन्ट प्लाज्मा थेरापी एउटा उपचार विधिका रूपमा आए पनि यतिबेला यसको उपयोगिताबारे अन्योल देखिएको छ । प्लाज्मा थेरापी उपचार विधिमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भई निको भइसकेका व्यक्तिको रगतबाट एन्टिबडी (रोगसँग लड्ने...
निजी अस्पतालको साझा प्रश्न : सरकार कहाँ छ ? हामी खोजिरहेका छौं access_timeबैशाख ३१, २०७८
कोरोना महामारीले उग्र रुप लिन थालेसँगै अक्सिजनको अभाव देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका निजी अस्पतालहरुले धमाधम हात उठाउन थालेका छन् । नयाँ कोरोनाका बिरामी लिन नसक्ने बताउँदै अस्पतालहरुले सूचना नै जारी गरिसकेका छन् । मुलुकभर अक्सिजनको हाहाकार भइरहँदा जिम्मेवार बन्नुप...
८४ वर्षीय हजुरआमाको कोरोना अनुभवः ‘संक्रमितलाई प्रेम गरौं’ (भिडियो सहित) access_timeबैशाख २९, २०७८
हजुरआमा कस्तो छ अहिले हजुरलाई ? सोह्रै आना ठिक छु बा म अहिले त । अस्ति अस्ति त खै के के भयो भयो ! मलाई पुरै डाहा छटपटी भयो । सास फेर्न नै सकिनँ । दौडेर बाहिर गएर पोखरीमा डुबुल्की मारु जस्तो भाको थियो । हँसिलो अनुहारसहित ८४ वर्षीय हजुरआमाको यो जवाफ सवै को...
‘ओहाे, लेडिज हुनुहुँदो रहेछ, सरी !’ access_timeचैत १८, २०७७
सानै छ खेत सानै छ बारी सानै छ जहान नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो कविताले निकै मन छुन्छ सम्झना पाण्डेलाई । ‘बाहिरबाट झट्ट हेर्दा जति सहज देखिन्छ नि, उति नै कठिन रहेछ जीवन,’ जीवन र भोगाइ सुनाउने क्रममा उनले भनिन्...
कसरी बन्ने पाइलट ? access_timeफागुन १०, २०७७
बाल्यकालमा आकाशमा जहाज उडेको देख्दा मुन्टो ठड्याएर आँखाले भ्याएसम्म जहाजलाई पछ्याउने जनक अधिकारीलाई यसरी नै उड्ने रहर सानैदेखि थियो । उनको त्यो रहरलाई साकार पार्न उनको मेहनत र परिवारले पनि सघायो । परिणामस्वरुप सन् २००९ मा उनी पाइलट पेशा अँगाल्दै जहाजको कक...
महिलालाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातिर डोर्याउने कडी हो ‘मेरी उनीलाई’ योजना access_timeमाघ २५, २०७७
नेपालमा महिला हक, अधिकार र सशक्तिकरणबारे धेरै पहिलादेखि बहस हुँदै आएको हो । विगतको तुलनामा महिलाहरुको सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र रोजगारका क्षेत्रमा विस्तारै पहुँच बढ्न थालेको छ, जसले आर्थिक स्रोतमा उनीहरुको स्वामित्व वृद्धि हुँदै गइरहेको पाइन्छ । तर पनि सदियौंदेखि...
महामारीलाई अवसरमा बदलेकी १७ वर्षीया जया access_timeमाघ १७, २०७७
जया राजभण्डारीको घरमा सधैँ काम गर्न आउने दिदी एकाएक काममा आउन छाडिन् । कारण थियो– कोरोना महामारी र लकडाउन । जया कै आमाले हो दिदीलाई केही समय काममा नबोलाउने निधो गरेको । घरको काम अब जया र उनकी आमा आफैले गर्दै थिए । महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको ...
बैंकिङ क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता : महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पिँदै नबिल बैङ्क access_timeपुस १६, २०७७
काठमाडौं । सन् १९९१ मा नबिल बैङ्कमा प्रवेश गर्नुअघि अन्तर्वार्ता दिन जाँदा नमिता दीक्षितलाई लागेको थियो, ‘म पनि यहाँ काम गर्न सक्छु होला र ?’ जागिरको लाइनमा निकै कममात्रै महिला देख्दा उनलाई त्यतिबेला अप्ठ्यारो महशुस भएको थियो । तर, त्यो समयमा&nbs...
पिसीआर परीक्षणमा ‘पोजेटिभ’ र ‘नेगेटिभ’ रिपोर्टको गोलचक्कर access_timeकात्तिक २१, २०७७
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीबारे विश्वभर नै विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् । ठाउँअनुसार फरकफरक लक्षण देखिनु, मानिसअनुसार पनि फरकफरक लक्षण देखिनु, कसैको पिसीआर हप्ता दिनमै नेगेटिभ हुनु त कतिको महिनौंसम्म पनि पोजेटिभ नै...